မနက်ခင်းလေးမှာ နိုးလာခဲ့ရင်…. - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
စက်တင်ဘာ 5, 2019 Kaseansom Viranuvatti, M.D. Pattcharanun Sripatthanawatt, M.D.
ကဖင်း နဲ့ အယ်လ်ကိုဟောတွေရဲ့ အစွမ်းသတ္တိဟာ သွေးကြောတွေကို ကျုံ့ ခြင်း ဆန့်ခြင်းတွေ ပြုလုပ်ပြီး ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်ကို လှုံ့ဆော်တာမို့လို့ အိပ်ရာထမှာ ခေါင်းကိုက်ခြင်း နဲ့ အန်ချင်ခြင်းကို ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။
အိပ်စက်ခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေ ရေရှည်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ နှလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ရောဂါတွေ၊ ရုတ်တရက်နှလုံးတိုက်ခိုက်ခံရတာတို့၊ နှလုံးရပ်သွားတာတို့၊ နှလုံးခုန်ပုံမမှန်တာတို့၊ သွေးတိုး၊ လေဖြတ်ခြင်း၊ ဆီးချို၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း နဲ့ စိတ်ရောလူပါ အားအင်ကုန်ခန်း မောပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းတို့ နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေးသုတေသီတွေဟာ ညဘက်မှာ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်ခြင်းရဲ့ အရေးကြီးပုံကို ကောင်းကောင်းကြီး သိကြတဲ့အပြင် ဆရာဝန်တွေကလည်း တစ်နေ့မှာ အနည်းဆုံး ၇ နာရီ ၈ နာရီကနေ ၉ နာရီအထိ အိပ်စက်သင့်တယ်လို့ အကြံပြုထားပါတယ်။ အသေးစိတ်ထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင် ည ၁၀ နာရီက နေ မနက် ၂ နာရီအတွင်း ကာလဟာ ကိုယ်ခန္ဓာကို တည်ဆောက်တဲ့ ဟောမုန်တွေ ထုတ်လုပ်တဲ့ကာလမို့ အဲဒီအချိန်အတွင်းမှာ လူဟာ အိပ်စက်နေသင့်ပါတယ်။ ဒါမှလည်း အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို နှေးကွေးစေမှာဖြစ်ပြီး အားအင်တွေ ပြည့်၀နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အိပ်ခြင်း နဲ့ ခေါင်းကိုက်ခြင်း
အအိပ်မက်သူတွေရဲ့ စောဒက ကတော့ ညဘက် အိပ်ရေးမဝရင် ခေါင်းကိုက်တာပဲတဲ့။ အအိပ်မမက်တဲ့ သူတွေကလည်း အိပ်လွန်းအားကြီးရင် ခေါင်းကိုက်တတ်တယ်လို့ ပြောကြပြန်ပါရော။ တကယ်တော့ အိပ်ခြင်း နဲ့ ခေါင်းကိုက်ခြင်းတို့အကြားမှာ ဆက်စပ်နေတဲ့ အချက်တွေ မြောက်မြားစွာရှိနေပါတယ်။
အိပ်ရင် ဟောက်တတ်တဲ့သူတွေဟာ နိုးလာတဲ့အခါမှာ ခေါင်းတွေ အုံပြီး ကိုက်နေတတ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အိပ်နေတဲ့အချိန်မှာ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ လုံလောက်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ကို မရခဲ့လို့ ပါပဲ။ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှာ ကာဘွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေနဲ့ ပိတ်နေခြင်း ဒါမှမဟုတ် ရှိသင့်တဲ့ ဂက်စ်ပမာဏထက် ပိုများနေခြင်းတို့ကြောင့် သွေးကြောတွေကို ကျယ်လာစေပါတယ်။ ရလဒ်ကတော့ နိုးလာတဲ့အချိန်မှာ ခေါင်းတွေ ကိုက်နေတော့တာပါပဲ။
လုံလောက်တဲ့ အနားယူမှု၊ ဒါမှမဟုတ် လုံလောက်တဲ့ အိပ်စက်မှု မရခဲ့ရင်လည်း ခေါင်းကိုက်တတ် ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် နာတာရှည် ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့သူတွေ၊ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက် ဝေဒနာ ရှိသူတွေ စတာတွေဟာ .. အခြား ပုံမှန်လူတွေထက် ခေါင်းကိုက်နိုင်ခြေ ပိုများ ပါတယ်။
အအိပ်လွန်ခြင်း ( ၉ နာရီထက်ပိုအိပ်တဲ့သူတွေ) ဟာလည်း ခေါင်းထဲကို သွေးပို့တဲ့နှုန်း နှေး သွားပြီးတော့ ခေါင်းကိုက်တတ်ပါတယ်။
အိပ်ခါနီး မှာ ကဖင်းဓာတ်ပါတဲ့ အရည်တွေ၊ အယ်လ်ကိုဟောတွေ သောက်သုံးရင်လည်း ကဖင်း နဲ့ အယ်လ်ကိုဟောတွေရဲ့ အစွမ်းသတ္တိဟာ သွေးကြောတွေကို ကျုံ့ ခြင်း ဆန့်ခြင်းတွေ ပြုလုပ်ပြီး ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်ကို လှုံ့ဆော်တာမို့လို့ အိပ်ရာထမှာ ခေါင်းကိုက်ခြင်း နဲ့ အန်ချင်ခြင်းကို ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။
စိတ်ဖိစီးမှုတွေများနေခြင်းဟာ ကြွက်သားတွေကို တင်းတောင့်နေစေတတ်ပါတယ်။ ဦးခေါင်းတို့ လည်ပင်းတို့၊ ပခုန်းတို့ တောင့်တင်းနေခြင်းဟာလည်း အိပ်စက်ခြင်းကို အနှောက်အယှက် ပေး တာမို့လို့ ခေါင်းကိုက်တတ်ပါတယ်။
အိပ်ချိန်မမှန်ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်သော ဘေးန္တရာယ်များ
အိပ်ချိန် တိုခြင်း / ကြာခြင်းတွေဟာ ကိုယ်ခန္ဓာကို အနုတ်သဘောဆောင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ ပေးတတ်ပါတယ်။ အိပ်စက်ခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေ ရေရှည်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ နှလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ရောဂါတွေ၊ ရုတ်တရက်နှလုံးတိုက်ခိုက်ခံရတာတို့၊ နှလုံးရပ်သွားတာတို့၊ နှလုံးခုန်ပုံမမှန်တာတို့၊ သွေးတိုး၊ လေဖြတ်ခြင်း၊ ဆီးချို၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း နဲ့ စိတ်ရောလူပါ အားအင်ကုန်ခန်း မောပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းတို့ နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
တက်တက်ကြွကြွမရှိ ထိုင်းမှိုင်းနေတတ်ပြီး နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို မလုပ်နိုင်ဘဲ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
ကြွက်သားနဲ့ အရိုးစနစ်တွေရဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်မှုတွေ ကျဆင်းပါတယ်။
ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ ဇီ၀ဖြစ်စဉ်တွေကို နှေးကွေးစေတာမို့လို့ အဆီတွေ စု လာတတ်ပါတယ်။ အဆီပိတ်ပြီး နောက်ဆက်တွဲ ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေ ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။
ဟိုမုန်းဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်ပြီး စိတ်ဓာတ်တွေ ကျ နေတတ်ပါတယ်။
ဦးနှောက်ရဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်မှုတွေ လျော့ကျလာတာမို့လို့ အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်း ကျဆင်းပါတယ်။
လိင်မှုဆိုင်ရာ စိတ်ဝင်စားမှု အားနည်းလာပါတယ်။
ပါးရေနားရေတွန့်လာတတ်ပါတယ်။ မျက်လုံးအောက်မှာ အိတ်တွေလို တွဲကျ လာတတ်ပါတယ်။
အိပ်ရာဝင်ချိန် အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် မှန်ပါစေ။ ကောင်းကောင်းအိပ်စက်နိုင်ဖိုပ အိပ်ချိန် ၇ နာရီကနေ ၉ နာရီလောက်အထိ ရရှိပါစေ။
နေ့ခင်း အကြာကြီးအိပ်ခြင်းကို ရှောင်ပါ။ နေ့ခင်းထမင်းစားပြီး ခဏဆို အိပ်လ်ိုက်တာ ညနေအထိ ရောက်သွားတတ်ပါတယ်။
ညစာကို အစာကြေလွယ်တဲ့ အစားအစာမျိုးကို စားပါ။ လုံး၀ ဘာမှ မစားဘဲနေခြင်းကို ရှောင်ပါ။ ဒါမှ အိပ်စက်နေချိန်အတွင်း အစာခြေစနစ်ရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို မထိခိုက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လေ့ကျင်းခန်းမှန်မှန်လုပ်၊ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို လျှော့ချ၊ အပြုသဘောဆောင်တဲ့စိတ်တွေကို များများမွေး၊- ဒါမှ ညဘက် ကောင်းကောင်း အိပ်ပျော်မှာပါ။
အိပ်ချိန်မမှန်တဲ့ ကိစ္စဟာ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးဝါးတဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေ ထင်ထားတဲ့အတိုင်း လိုက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူပဲ ကောင်းစွာအိပ်စက်နိုင်ခြင်းဟာလည်း ကောင်းမွန်တဲ့ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေကို ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နေမကောင်းမဖြစ်စေတာ အပြင် ကိုယ်ခန္ဓာကို သင့်တင့်မျှတစေပြီး ကိုယ်အလေးချိန်ကိုလည်း ထိန်းညှိဖို့ ပိုပြီးလွယ်ကူစေပါတယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကိုလည်း အားဖြည့်သန်စွမ်းစေပြီး ဟော်မုန်းစနစ်ကိုလည်း အပြည့်အဝ အလုပ်လုပ်စေပါတယ်။ ကောင်းစွာအိပ်စက်နိုင်ခြင်းဟာ ကိုယ့်အပေါ်မှာ စိတ်ရောကိုယ်ပါ အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရရှိမှာဖြစ်ပြီး အသားအရေ ကြည်လင်ဝင်းပလို့ နုပျိုလန်းဆန်းစေမှာ ဖြစ်လို့ ကောင်းကောင်းအိပ်ပြီး ကြည်ကြည်လင်လင်နိုးထနိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်။
မနက်ခင်းလေးမှာ နိုးလာခဲ့ရင်…. ကျန်းမာရေးသုတေသီတွေဟာ ညဘက်မှာ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်ခြင်းရဲ့ အရေးကြီးပုံကို ကောင်းကောင်းကြီး သိကြတဲ့အပြင် ဆရာဝန်တွေကလည်း တစ်နေ့မှာ အနည်းဆုံး ၇ နာရီ ၈ နာရီကနေ ၉ နာရီအထိ အိပ်စက်သင့်တယ်လို့ အကြံပြုထားပါတယ်။ အသေးစိတ်ထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်
User rating: 3.83 out of5with 12 ratings